ငြိမ်းချမ်းအေး – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သြဇာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး - အနှစ် နှင့် အကာ
သာထက်အောင် ● လုပ်စားကိုင်စား နိုင်ငံရေးသမား
စားစရာမရှိတဲ့သူနဲ့ ထားစရာမရှိတဲ့သူရဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကြားချဖို့ ပြောနေသူအားလုံးအတွက် ရည်ညွှန်းတဲ့စာ
မြင့်ကျော် ● ဘာပြဿနာတွေရှိခဲ့တာလဲ
တူမောင်ညို - အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ခေါင်းလောင်းကြီး အရင်ဆယ်ကြပါဦး
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သြဇာ
(မိုးမခ / သည်လေဒီးစ်နယူးစ်) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၅
‘နာမ်သြဇာ’ လို့ အတိုဆိုနိုင်တဲ့ ‘Moral Authority’ ကို ခြုံငုံမိအောင် ဘာသာပြန်ရရင် ‘ကျင့်ဝတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနမူနာပြု ဦးဆောင် လမ်းပြ၊ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်၊ သြဇာညောင်းမှု’ လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကို အကျယ်ဖွင့်ရင် ၀ိဇ္ဇာ (ပညာ) နဲ့ စာရဏ (အကျင့်) ကို ထပ်တူပြု သိမြင် ကျင့်ကြံ စံပြ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကနေ သီလ၊ သမာဓိ၊ စာရိတ္တ၊ ကျင့်ဝတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေ ဖော်ထုတ်နိုင်၊ လူသားတွေအပေါ် ရှေ့ဆောင် လမ်းညွှန် သင်ပြနိုင်၊ စိတ္တ အာဟာရ ခွန်အားကို ဖြည့်စွက်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် လူသားတွေက ပြန်လည် စံနမူနာပြု လိုက်လံ အတုယူ၊ ရိုသေ၊ မြတ်နိုး၊ ကိုးစားမှု ခံယူရခြင်းနဲ့ အတူ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု သြဇာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်း၊ သတ်မှတ်ချက် (Norm) တွေ၊ မူဝါဒ (Principle) တွေနဲ့ တန်ဖိုး (Value) တွေကို အခြေခံပြီး စံနမူပြု ရေရှည် ကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင်ပြနိုင်မှု ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုခဲ့တဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ စံနှုန်း၊ မူတွေဟာ လူလုပ် ဥပဒေ ဆိုတာတွေထက် ပိုလေးနက်ပြီး အခြေခံကျသလို လူသားတွေရဲ့ အတွင်း အဇ္ဈတ္တသန္တာန်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်၊ ကာလကြာရှည် စွဲမြဲနိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက် အရ လူသားတွေအပေါ် ‘Moral Authority’ အရှိဆုံးကတော့ ကမ္ဘာမှာ ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားတွေ၊ တမန်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ထေရ်ကြီးဝါကြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာလည်း လူသားတွေအပေါ် ‘Moral Authority’ သြဇာကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု မသက်ဆိုင်တဲ့ အခြား လူသားအကျိုးပြု စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ သာမန် လူသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်း “Moral Authority” သြဇာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းက ကမ္ဘာ့လူသား အကျိုးပြုနဲ့ လောကီ ရေးရာ လွတ်မြောက်၊ ငြိမ်းချမ်းရာ လုပ်ငန်းတွေ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်း သူမတူ ထူးခြား၊ ရှားပါးတဲ့ ‘သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ’ ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – မဟတ္တမဂန္ဒီ (၁၈၆၉-၁၉၄၈)။
နိုဗယ်လ်ဆုရှင်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင်လည်း နှစ်တချို့မှာ အငြင်းပွားဖွယ် ဆုရွေးချယ်မှု သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့ပြီး အင်အားကြီး အနောက်အုပ်စုရဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေ ပါဝင်ပတ်သက် လွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့ပေမဲ့ ယေဘုယျအနေနဲ့တော့ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ အထိုက်အလျောက် ‘Moral Authority’ သြဇာကြီးသူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ တရားမျှတမှုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ လူသား (ကျား/မ/လူမျိုး/ဘာသာ/ အသားအရောင် မခွဲ တန်းတူ) အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရရှိအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူသား တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ လူသားတွေရဲ့ လူမှုစီးပွား ဘဝ တိုးတက်အောင် ကြံဆောင်ခြင်း၊ သတ္တ၊ ရုက္ခ လောက၊ ကမ္ဘာ့ ပထဝီမြေကြီးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စည်ပင်ဝပြော ရှင်သန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့် လူသားနဲ့ ကမ္ဘာမြေအပေါ် ကျေးဇူးပြုနိုင်ခြင်းနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ ‘Moral Authority’ ဟာလည်း ကမ္ဘာ့ လူသားများအကြားမှာ ကြီးမားလှပါတယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့သဘောမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်း နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ လူထုကိုယ်စားပြု ခေါင်းဆောင် အနေအထားအပြင် လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ ဒီမိုကရေစီရဲ့ သင်္ကေတ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုရဲ့ ပုံရိပ် အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့လူသားတွေအပေါ်မှာ ‘Moral Authority’ ရှိပါတယ်။ သူရေးတဲ့ စာတွေ၊ သူပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို ထင်ရှားတဲ့ အရှေ့၊ အနောက် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ အပါအဝင် ကမ္ဘာ အနှံ့က လူသား အတော်များများဟာ ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှု၊ ကြားနာကြသလို သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ခံယူချက်၊ သဘာထားတွေကိုလည်း လေးစား အသိအမှတ်ပြု၊ စံနမူနာယူမှုတွေ ရှိပါတယ်။
သူဟာ ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ခြင်း၊ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ သိက္ခာ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ပြည့်စုံခြင်း၊ တကိုယ်ရေ အားဖြင့် အရည်အချင်း ကြွယ်ဝခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက မိသားစုဘဝ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု တို့အပြင် လူအများကို သြဇာစူး၊ စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းတဲ့ အထုံ ပါရမီ အရည်အသွေးများဖြစ်တဲ့ အလိုအလျောက် မျက်နှာပွင့်လန်း၊ ကျော်စောထင်ရှား အကြီးအမှူး ခေါင်းဆောင် နေရာရယူနိုင်ခြင်း ဖြစ်စေမှု မွေးရာပါ “Charisma” နဲ့လည်း ပြည့်စုံနေပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထု အကြွင်းမဲ့ အလုံးစုံ လေးစားချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မျိုးဆက် ဖြစ်နေခြင်းဟာလည်း သူ့ရဲ သြဇာသက်ရောက်မှုကို အထွတ်အထိပ် ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီလို နောက်ခံကားချပ်မှာ လူအများအနေနဲ့ သူ့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှု၊ မဟာလူသား ဆန်ဆန် သာမန်ထက်ပိုတဲ့ အလေးထား၊ ဂုဏ်ပြုဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အတူ ဘုရားတဆူ ဂူတလုံးသဖွယ် ပူဇော်ဆည်းကပ်၊ အမြတ်တနိုးထားကာ နတ်ဘုရားဆန်ဆန် ကိုးကွယ်မှု (Divine Worship) တွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကိုးကွယ်မှု၊ ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ ဝိုင်းဝန်းမှုမှာ အစစ်အမှန် ချစ်ခင်မြတ်နိုး၊ လေးစား တန်ဖိုးထားမှုကြောင့် ကိုးကွယ်နေသူ နောက်လိုက်တွေ ရှိသလို နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နဂိုသြဇာအပြင် အာဏာပါ အထိုက်အလျောက်တက်လာမှုကြောင့် သာပေါင်းညာစား ဖော်လံဖား အခွင့်အရေးသမား (Sycophants) တွေလည်း များပြားလာတာ သဘာဝပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများရဲ့ရေချိန်ဟာလည်း ရာစုဝက်ကြာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးဒဏ် ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် ပညာရည် နိမ့်ကျ၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ပိုင် တွေးခေါ်စဉ်းစာဆင်ခြင်နိုင်မှု အမြော်အမြင်နည်းပါး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မေးခွန်းထုတ် ပြန်လည် ဆွေးနွေးမှုနိုင်မှု၊ အမြင်သစ်၊ အတွေးသစ်၊ အလုပ်သစ်ကို ကိုယ်ပိုင်စူးစမ်း ရှာဖွေလိုမှု ဓလေ့ ဆိတ်သုဉ်းခြင်းနဲ့အတူ အလုံးစုံ အမိန့်နာခံတတ်မှုဟာ နေရာ၊ ကိစ္စ တိုင်းလိုလိုမှာ အရည်အသွေး၊ လိုအပ်မှု တခုလို ဖြစ်လာကာ သာမန်ထက် ထူးကဲတဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့၊ သြဇာရှိတဲ့၊ အာဏာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ စကားကိုသာ တသွေမတိမ်း နာခံလိုစိတ်ဟာ လူအများကြားမှာ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတခုလို အမြစ်တွယ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဓလေ့ကို ကြည့်ပြန်ရင်လည်း အထက်လူကြီးကို မိဘ၊ ဆရာ နည်းတူ ရိုသေ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရလေ့ရှိတာကြောင့် ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကို ပြန်လည် ဝေဖန်ဆန်းစစ်လိုမှု အင်မတန် နည်းပါးလှပါတယ်။
ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေအားလုံးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အကြွင်းမဲ့ နာခံတော် နောက်လိုက် အများအပြားကို မွေးဖွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကိုးကွယ်ယုံကြည်၊ ထောက်ခံမှုနဲ့ အလုံးစုံ အမိန့်နာခံမှု ရဲ့ သဘောဟာ အကိုးကွယ်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ‘Moral Authority’ သြဇာ အားပြည့်နေသမျှ၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်၊ သဘောထား မပြောင်းလဲသမျှ ပြဿနာမ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ (၂၀၁၁) နောက်ပိုင်းကစလို့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအရ ပါတီနိုင်ငံရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အရေးပါ၊ အရာရောက်တဲ့ လူတန်းစားတစု ထောက်ခံမှုကို ပိုမိုအရေးပေးဖို့ အခြေအနေတွေက တောင်းဆိုလို့ လိုအပ်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ‘Moral Authority’ ရှိသူ၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဲ့ သင်္ကေတ ပြယုဂ် အနေအထားကနေ ယုတ်လျော့လို့ လာနေပါပြီ။ ဒီသဘောကို စံနှုန်း၊ မူတွေ အလေးပေးလာရာကနေ မူဝါဒ၊ အတွေးအခေါ်၊ စံသတ်မှတ်ချက်တွေထက် လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်ရေးကို ဦးစားပေး စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ပြောင်းရတဲ့ ပါတီနဲ့အာဏာ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းကို စတင်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၂) ကတည်းက နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တချို့ (ဥပမာ – ဟီလာရီ ကလင်တန်)၊ ပညာရှင်နဲ့ လေ့လာသူတွေ သတိပေးပြောဆို၊ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံရေး ကစားမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးသဘောအရ အပေး-အယူ၊ အလျှော့-အတင်းပြုလုပ် ဈေးဆစ်ရမှုတွေ၊ ဈေးဆစ်ခံရမှုတွေ၊ ငဲ့ကွက်ရမှုတွေ မဖြစ်မနေ ကြုံလာ၊ လုပ်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဒီအနေအထားမှာ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်ဗဟိုပြု ထောက်ခံမှုနဲ့ နတ်ဘုရားဆန်ဆန် ချီးပ ကိုးကွယ်မှုတွေဟာ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံ၊ တော်တည့်မှန်ကန်တဲ့ အနာဂတ် တိုင်းပြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးဓလေ့ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ ဟန့်တားမှု၊ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တန်ခိုးရှင် မဟုတ်တဲ့ ပုထုဇဉ် လူသားသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားသာချက် ရှိသလို၊ အားနည်ချက်လည်း ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားအယွင်းနဲ့ မူဝါဒ အလွဲတွေလည်း ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကို မူတည်ပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်ကာ လူနဲ့နိုင်ငံရေး မကွဲရင် နိုင်ငံမှာ အကောင်းထက် အဆိုးဖြစ်ဖို့က ပိုများပါတယ်။
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလားရာကို သုံးသပ်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း စစ်အုပ်စု အသိုက်အမြုံ တခုလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးရင်းနဲ့ လက်နက်ကိုင် စစ်တပ်နဲ့ရဲကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ လက်ရှိအစိုးရမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အာဏာ အပြည့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို လူထုနဲ့ နိုင်ငံတကာအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ သြဇာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ သူတို့ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအရွေ့ကို လူအများနဲ့ နိုင်ငံတကာက ပိုမိုထောက်ခံ အသိအမှတ်ပြုလာဖို့ရာအတွက် လူထုနဲ့ ကမ္ဘာ အပေါ် သြဇာညောင်းတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုကို အလိုရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်း ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအနေအထားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သြဇာပိုင် အဖြစ်ကနေ အာဏာရှိသူနဲ့ အခြေအနေအရ ပူးပေါင်းနေရတဲ့အတွက် အာဏာပိုင်အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အာဏာရ အစိုးရရဲ့ လွှတ်တော်မှာလည်း လွှတ်တော်အမတ် နေရာ အပြင် အခြား ရာထူးနဲ့ တာဝန်တွေကိုပါ ပူးတွဲ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက် သူဟာ အတိုက်အခံပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင် အနေအထားထက် အာဏာရ အစိုးရရဲ့ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ပိုမို ရှုမြင်နိုင်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဟိုအရင် အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံလာခဲ့တဲ့ နောက်လိုက်တွေထဲက လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကိုးကွယ်သူတွေကလွဲလို့ မူဝါဒ လုပ်ရပ်ကိုသာ သုံးသပ်လေ့လာပြီး ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ကျန် လူအများကြားမှာ သူ့ရဲ့ရပ်တည်မှုအပေါ် ပြန်လည် မေးခွန်းထုတ်မှုနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၁၁) အစိုးရသစ်နောက်ပိုင်း အလုပ်သမား၊ လယ်သမား၊ တိုင်းရင်းသား၊ ပြည်တွင်းစစ်ကန အခုနောက်ဆုံး ကျောင်းသားအရေးထိမှာ တရားမဲ့မှု အစုစု အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တည်ရှိပြီးသူ့ရဲ့ သြဇာ၊ အသံကို အပြည့်အဝအသုံးမချခဲ့တာဟာ ဘာပယောဂအစွဲ တိမ်သလ္လာမဖုံးရင် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး ကျောင်းသား အရေးမှာဆိုရင် အကြမ်းဖက်မခံရဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်ကြိုကာကွယ် ကြားက ဝင်ရပ်ခွင့် အခြေအနေ၊ အချိန် အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်မှု မပေးခဲ့ပါဘူး။ အခု ‘စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တွေက အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ လွှတ်တော်က ဘာအာဏာမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး’ ဆိုပြီး ခေါင်းလွှဲစကားဆိုနေပေမဲ့ လက်ပံတောင်းကိစ္စမှာဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကော်မရှင်ထဲမှာပါခဲ့သလို စစ်အုပ်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွားဘက်က ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ လွှတ်တော်က အာဏာမရှိဘူး အခု ဆိုပေမဲ့၊ ဒီလမ်းကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ခံ လျှောက်ခဲ့တာပါပဲ။ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရရင်၊ လူထုထောက်ခံမှု သြဇာကို အသုံးချ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဘောင်ချဲ့ယူရမှာ ခေါင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ‘Moral Authority’ ကိုကျဆင်း ညှိုးနွမ်းစေတဲ့ပုံရိပ်တွေပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြွင်းမဲ့ချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်သူများ ပြန်ဆိုလေ့ရှိတဲ့ ဘုံရန်သူ စစ်အုပ်စုကို အရင်တိုက်ပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ညီညွတ်ကြပါဆိုတဲ့ သဘောတွေဟာ တကယ်တော့ ပြဿနာရင်းမြစ်ကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ လူထုရဲ့ ဘုံရန်သူထဲ ကိုယ့်ခေါင်းဆောင် ဝင်မရပ်မိအောင် နောက်လိုက်က ဝေဖန်မှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ခေါင်းဆောင်-နောက်လိုက်ပုံစံဖြစ်မှာပါ။ ဘုံရန်သူဆိုတာ လက်ရှိ စစ်တပ်၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရ၊ ဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ်တော်၊ ဦးရွှေမန်း၊ နောက်ကွယ်က ဗိုလ်သန်ရွှေ၊ သူတို့အားလုံးကို အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ (၂၀၀၈) စစ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုပြီး သီးသန့်ခွဲခြားမြင်လို့ မရသလို၊ ပုဂ္ဂကသဘောလည်း မဆောင်ပါ။ စစ်အုပ်စု နှစ်ငါးဆယ်ကျော် တည်ဆောက်ယူ အသားကျ စေခဲ့တဲ့ လူနဲ့လူချင်း ချနင်း အသုံးချ၊ ဖိနှိပ် သွေးစုပ် မင်းမူတဲ့ ပဒေသရာဇ်နဲ့ အရင်းရှင် စနစ်ဆိုး (၂) ခုပေါင်း အကျင့်လုပ်ထုံးကိုမှ စစ်တပ်ဆိုတဲ့ အာဏာဒေါက်တိုင်ယူ လက်နက်အားကိုး ဘုရင်လုပ်ချင်တဲ့ အုပ်စိုးသူ၊ အုပ်စိုးခံ၊ ဖိနှိပ်သူ၊ အဖိနှိပ်ခံ စနစ်ကြီးတခုလုံးကို မျက်မှောက်ရှုနိုင်ရပါမယ်။ ဒီလိုမြင်နိုင်ရင် ဓမ္မနဲ့အဓမ္မ၊ တရားမှုနဲ့တရားမဲ့မှု တိုက်ပွဲတွေမှာ မူဝါဒကိုအခြေခံ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်၊ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ထွက်ဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိလာပါမယ်။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနေအထား “စံနှုန်း၊ သတ်မှတ်ချက် နဲ့ မူ” အပေါ် အလျှော့-အတင်း၊ အပေး-အယူ လုပ်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဘဝကို အခြေအနေ၊ အတိုင်းအတာတခုအထိ နားလည်လက်ခံပေးနိုင်စရာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မူဝါဒနဲ့ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်ဟာ အကျိုးကျေးဇူးမများနိုင်ပါ။ ဂန္ဒီကြီးရဲ့ လှုမှုအပြစ် (၇) ပါး အရ ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အပြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အာဏာရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးကို ရှေးရှုကာ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ မျက်မှောက်နဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံရေး လမ်းခရီးမှာ အမျိုးမျိုးသော လှည့်ကွက်တွေ၊ ထောင်ခြောက်တွေ၊ ခါးအောက်ပိုင်း လက်သီးပုန်း ထိုးကွက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ သဘော၊ ဆန္ဒ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် တခုတည်းနဲ့ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီအရေးဟာ ပြည့်စုံကောင်းမွန် သန်စွမ်းတဲ့ အနေအထားမျိုး ဘယ်လိုမှ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပြန်လည် မေးခွန်းထုတ်တတ်၊ ဝေဖန် သုံးသပ်တတ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဓလေ့ လိုနေပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင် စိတ်ကူးယဉ်၊ လက်တွေ့မကျဘူးပဲဆိုဆို ပြစ်မျိုးမထင်၊ မူဝါဒ၊ ကျင့်ဝတ် ခိုင်မာ၊ “Moral Authority” အပြည့်ရှိတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်။ တည်ရှိပြီး သြဇာကို အသုံးချ မတရားမှုတွေကို အခုထက်ပို အကာအကွယ်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းဟာ ဆိုခဲ့သလို အလုံးစုံ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး နိုင်ငံရေးမှာ လူစွဲကင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုကင်း၊ ဘက်ပေါင်းစုံက အမြင်ပေါင်းစုံနဲ့ လူတိုင်း အသံကျယ်ကျယ်ထွက်၊ ခေါင်းဆောင်အပေါ် အကျိုး/အကြောင်း ထောက်ပြ၊ ခေါင်းဆောင်ကလည်း လက်ခံစဉ်းစား သုံးသပ် တဲ့ နိုင်ငံရေး အလေ့အကျင့်ကောင်း၊ ဓလေ့ကောင်းတွေ ရှင်သန်၊ ထွန်းကား၊ အမြစ်တွယ် စေချင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြား၊ ကျိုးကြောင်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု “ဝိဘဇ္ဇ” သဘောဟာ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမနဲ့လည်း ညီပါတယ်။ (၂၀၁၅) ‘ပြီး’ လည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးက ‘ပြီး’ မှာ မဟုတ်သေးတဲ့အတွက် အားလုံး မြော်မြင် ချင့်ချိန် အသံတွေ ထွက်စေချင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၅ (အသစ် တည်းဖြတ် ရေးသားခဲ့သည့် ရက်စွဲ)
[(၂၀၁၃) ခုနှစ် မတ်လ (၂၁) ရက် မိုးမခ တွင် ရေးခဲ့သည့် “‘Moral Authority’၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗမာ့နိုင်ငံရေး” ဆောင်းပါးဟောင်းကို အခြေခံ၍ အသစ်ပြင်ဆင် တည်းဖြတ် ရေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်လေဒီးစ် သတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ (၂)၊ အမှတ်စဉ် (၅၆)၊ (၂၀၁၅) ခုနှစ် မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ သောကြာနေ့ထုတ်၌ ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ယခု မိုးမခတွင်လည်း အွန်လိုင်း ထပ်မံ ဖြန့်ချိသည်။ ဆောင်းပါးပါ အာဘော် ကို ဝေဖန်ရန် လွတ်လပ်စွာ မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါသည်၊ nyeinchanaye81@gmail.com သို့လည်း စာရေးနိုင်ပါသည်။]
Title Photo by Claude TRUONG-NGOC at 22 October 2013, 12:18:02. The awarding ceremony of the 1990 Sakharov Prize for Freedom of Thought prize awarded to Aung San Suu Kyi inside the Parliament’s Strasbourg hemicycle. NON-COMMERCIAL USE ONLY!
မူလ မိုးမခ ဆောင်းပါးဟောင်း “Moral Authority၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗမာ့နိုင်ငံရေး”
One Response to ငြိမ်းချမ်းအေး – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သြဇာ
Ko Zaw on March 21, 2015 at 4:13 pm
ပုဂ္ဂလိက မိသားစုဘဝ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများရဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည် ပြေပြစ်ခြင်း၊ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ခြင်းတွေက အပေါ်ယံဖြစ်ပေမဲ့ အတွင်းနှလုံးသားက အလွန်မြင့်မြတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားဖြစ်တဲ့အတွက် အားနည်းချက်ရှိမှာပါ။ သူတော်စင်တော့ မဟုတ်ပါ။ အခုတော့ မျိုးစောင့်ဥပဒေအတည်ပြုသွားပြီး၊ ပီအာစနစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုအတည်ပြုဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ တွေဝေနေသူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ မမေ့စေလိုပါ။